Uphononongo lweAvaTrade kaJanuwari 2022: Imirhumo yeQonga, ukuSasazeka, kunye noMgaqo
Uphengululo lweAvaTrade: Imirhumo yeplatifomu, ukusasazwa, iiasethi ezinesiko kunye noMmiselo 2021
Uphengululo lwe-AvaTrade, i-AvaTrade ibikwindawo ukusukela ngo-2006-iyenza enye yezona brokerage zidala zisuselwe kwiwebhu phaya. Ngenkxaso yeelwimi ezininzi, uluhlu olubanzi lwamaqonga, kunye ne- $ 60 yezigidigidi kwimilinganiselo yokuthengisa ngenyanga-ayimangalisi into yokuba i-AvaTrade iphumelele amabhaso amaninzi.
Lo broker uzingca ngokuba nexabiso elingagungqiyo kunye nokuthembeka, ukuvelisa okuqhubekayo kunye neqela elikhulu lenkonzo yabathengi. Kodwa, ukuba ufuna ukwazi okungakumbi ngaphambi kokuba ungene kule broker ekwi-Intanethi, sukujonga phambili.
Siza kuthetha ngayo yonke into ukusuka kwinto eyi-AvaTrade, izixhobo ezahlukeneyo zezemali ezigcinayo, izixhobo, iifizi, umgaqo, kunye nokunye.
I-AvaTrade ngumrhwebi okwi-Intanethi owasekwa okokuqala ngaphezulu kweminyaka eyi-14 eyadlulayo. Inxalenye yeqela elibanzi le-AVA. Le broker sisiseko se-forex yamanye amazwe kwaye Urhwebo lweCFD eqongeni.
Ngokufanelekileyo ukusasazeka kukhuphiswano kunye nezixhobo zemfundo ezigqwesileyo- ayimangalisi into yokuba umboneleli ephuhlise isiseko esomeleleyo sabathengi abangama-200,000. Oku kuguqulela kwimilinganiselo yokurhweba malunga nezigidi ezibini zeendawo ngenyanga.
I-AvaTrade ijolise ingqalelo kubarhwebi kuwo onke amanqanaba ezakhono. Inika abathengi amaqonga orhwebo aguqukayo kunye nezixhobo ezahlukeneyo zotyalo mali. Siza kugubungela ukuthengisa ezona mpawu ziphambili ngokweenkcukacha kamva.
Ngaba i-AvaTrade ilawulwa ngokupheleleyo?
Ewe. Kumazwe ama-5 akukho ngaphantsi. Apha ngezantsi sidwelisa indawo yolawulo efumaneka kwi-AvaTrade:
I-Ava Capital Markets Australia Pty Ltd (No. 406684) - ilawulwa yi-ASIC
I-AVA Trade EU Ltd (Nombolo C53877) - ilawulwa yi-Central Bank yase-Ireland
I-Ava Capital Markets Pty (FSP No. 445984) - ilawulwa yiBhodi yeNkonzo yezeMali yaseMzantsi Afrika (FSP).
I-AVA Trade Ltd-ilawulwa yiKhomishini yeeNkonzo zezeMali zeBVI
I-Ava Trade Japan KK eJapan-ilawulwa yi-FSA
Kanye njengamazwe amahlanu apho i-AvaTrade ilawulwa khona, umthengisi ukwaqhayisa ngeofisi yokuthengisa eDublin (kwiofisi eyintloko), eMilan, eParis, eTokyo, eSydney, eRhawutini, eBeijing, eMongolia, eSantiago naseMadrid.
Baninzi abathengisi beenkomo ngaphandle abalinde ukuthatha ithuba labarhwebi abangalindelanga. Ngethamsanqa, i-AvaTrade ngumzekelo oqaqambileyo womthengisi othembekileyo oneminyaka yamava.
Iqonga lihlonitshwa kakhulu kolu shishino kwaye lidume ngokuthobela imigaqo kwilizwe jikelele. Isixa solawulo ku-AvaTrade silawulwa ngeendlela ezifunekayo ukuthobela umthetho kumacandelo aliqela.
Ndingathengisa ngantoni kwi-AvaTrade?
Nge-AvaTrade uyakwazi ukurhweba ngezixhobo ezahlukeneyo zemali. Oku kubandakanya amasheya, ii-indices, ii-ETFs (iimali ezithengiswa ngemali), izinto zorhwebo, ukhetho kunye neebond.
Makhe sijonge indlela isebe ngalinye elithelekisa ngayo kwiAvaTrade.
Nangona ingafumaneki eCanada, iAvaTrade ikuvumela ukuba uthengise ngee-imali yedatha ukusuka kwi-100 yeedola ubuncinci, kunye nokufikelela ukuya kuthi ga kwi-1: 20.
Unokurhweba ngeyona ndawo iphakamileyo ye-cryptocurrensets ezingama-24 ngosuku, ngokwazi ukuhamba ixesha elide okanye elifutshane.
Oku kuthetha ukuba xa amaxabiso ehla, unokwenza inzuzo. Ngokuchasene noko, oku ngekhe kwenzeke ukuba uburhweba ngokutshintshiselana ngesiqhelo nge-imali yedatha engaxhasi iiCFD.
Ngapha koko, ngokuphepha ukutshintshiselana, akukho bungozi bokubhuqwa kwesipaji okanye ukubiwa. Ngapha koko, nge-AvaTrade, awudingi nokuhamba kobunzima bokufumana isipaji se-cryptocurrency - njengoko yonke into iququzelelwa ngezixhobo zeCFD.
Nangona i-Bitcoin yimali yedijithali evakalayo ngabantu abaninzi, i-AvaTrade ibonelela ngeemfumba zezinye iingqekembe zedijithali.
I-AvaTrade ibonelela ngaphezulu kwezibini zemali ezingama-50. Oku kubandakanya ii-majors, abancinci, kunye neendidi ngeendidi zeeparitha ezingaqhelekanga.
Enkosi kwimimiselo ye-ESMA; Kuzo zonke iintlobo zezixhobo ze-AvaTrade kufuneka zigqibe isixa semali ekunikezelweni. Kwimeko yeebhangqa zemali, oku kuma ngo-1: 30 ukuba ungumthengi wentengiso. Ukuba uthathwa njengomrhwebi oqeqeshiweyo, imali iya kuba phezulu kakhulu.
Ukuba isitokhwe yeyona nto uyithandayo, i-AvaTrade ikunika ukufikelela kwiimfumba zezixhobo. Oku kubandakanya iimarike ezininzi zezemali, kubandakanya i-UK ne-US.
Njengokuba kunjalo kuzo zonke iiklasi zeasethi kwiAvaTrade, umthengisi uyakuvumela ukuba uhambe ixesha elide okanye elifutshane. Oku kuthetha ukuba ungazuza kwimeko apho ucinga ukuba inkampani izakuhla ngexabiso.
I-AvaTrade iluncedo ukuba ucwangcisa ukungena ekuthengiseni nasekuthengiseni izikhundla kwizinto zorhwebo. Oku kubandakanya umnikelo oqhelekileyo wegolide, isilivere, ioyile, igesi yendalo, kunye nokunye.
Ngokumalunga nokukhetha, i-AvaTrade ibonelela ngeendlela 'zevanilla' (okanye ibeka iminxeba) ngaphezulu kwama-50 amabini ahlukeneyo emali, kunye negolide kunye nesilivere.
Xa ixabiso langaphakathi lifikelelwe liya kulungiswa imali kwaye livaliwe ngokuzenzekelayo.
Ezinye izinto ezinokuthengiswa kwiAvaTrade zibandakanya ii-ETFs, iibhondi, ii-indices kunye nekamva- zonke zikwimo yeeCFDs.
Iindidi zePlatform yokuthengisa
Enye yezona zinto zibalaseleyo malunga ne-AvaTrade linani lamaqonga orhwebo elenziwa ukuba libe ngumrhwebi. Ayinamsebenzi nokuba uligqala kwezorhwebo, kwinqanaba eliphakathi, okanye awuzange uthengise ebomini bakho-kukho into kuwo wonke umntu.
I-AvaTradeGO liqonga elinomdla kakhulu elikuvumela ukuba urhwebe ngesixhobo sedesktop, kwisikhangeli sewebhu esemgangathweni, okanye kwifowuni ephathwayo. Iqonga elingaphakathi endlwini likuvumela ukuba ulawule iiakhawunti ezahlukeneyo, kubandakanya nezoncedo lweedemo.
Le app yeselfowuni ikwapakishwe nezinto eziluncedo. Uyakwazi ukwenza 'uluhlu lokubukela', jonga ukurhweba ngokulula, ubeke iiodolo, kwaye ujonge iindidi zeetshathi kunye namaxabiso. Ngokusisiseko, malunga nayo nayiphi na into onokuyenza kwidesktop yakho, ngoku unokuyenza ukusuka kwisicelo esiphathwayo se-AvaTradeGO.
Uyakwazi ukujonga ngokukhawuleza nakuphi na ukubonwa koluntu oluvela kubemi be-AvaTrade enkosi kubuchwephesha obukhethekileyo 'kwintengiso' Kufuneka kuthiwe eyona nto iphambili kule app kukuba ubungakanani bescreen sefowuni bunokuba nefuthe kwezinye izinto onokuthi uzithengise.
IMetaTrader 4 (MT4)
Uninzi lwabarhwebi baya kuba bevile ngeqonga elidumileyo leMetaTrader. Ukuthandwa kwayo sesinye sezizathu zokuba kukho uluhlu olubanzi lwabarhwebi abaluxhasayo ngoku-kubandakanya i-AvaTrade.
Kananjalo, ungayisebenzisa kwikhompyuter yakho, kwiselfowuni, okanye kwisikhangeli sakho sewebhu. MT4 Zithembisa ukungabikho ngenxa yokukhanya kwesoftware. Nangona kunjalo, i-MT4 kwi-AvaTrade ibonelela ngezinto ezininzi eziluncedo njengokulinda ii-odolo, ukwenziwa lula komyalelo, iitshathi ezininzi, ukulahleka kokuyeka ukulahleka nokunye okuninzi.
Ngaphezulu kwamaqonga akhankanywe apha ngasentla, i-AvaTrade ikwabonelela ngesoftware ezenzekelayo. Oku kuthetha ukuba kukho into kuwo wonke umntu.
Inkonzo yeMpawu zeMQL5
Kuya kufuneka siyiqaphele into yokuba abatyali mali banakho ukusebenzisa ngokupheleleyo urhwebo lwemoto iinkqubo ngeMT4. Kukwafanelekile ukuba uqwalasele inkqubo yeAva AutoTrader- eyenza ukuba isebenze urhwebo lwe-algorithmic.
Amaqonga e-forex ye-forex - kukho ii-APIs ezininzi (iZicelo zeNkqubo yokuSebenza) onokufikelela kuyo kwi-AvaTrade. Ziyakwenza ukuba ukwazi ukwenza izisombululo ezizenzekelayo xa uthengisa i-forex ukusuka emhlabeni.
Ngokubanzi, zimbini iintlobo zeakhawunti ezinikezelwa kubarhwebi. Ezi ziiakhawunti zeedemo kunye nomgangatho, kodwa kukwakho nezinye ezimbalwa onokuzikhankanya.
Ukuya kuthi ga ngokuvula iakhawunti esemgangathweni, unokuvula enye nge-100 nje kuphela ukuba usebenzisa ikhadi lakho letyala. Ukuba, nangona kunjalo, uceba ukusebenzisa ugqithiselo lwebhanki, emva koko uza kudinga i-500 yeedola ukuvula iakhawunti yakho.
Ukuvula iakhawunti yedemo kwiAvatrade akuyi kuba neendleko kwaphela. Ngokubalulekileyo, uyakufumana imali eyi- $ 100,000 yexabiso lemali oza kuziqhelanisa nayo.
Thina kuFunda u-2 ukucebisa ukuba le yeyona ndlela ilungileyo yokuba uqhelane neqonga labarhwebi. Ikwayindlela entle yokufumanisa ukuba yeyiphi izixhobo onomdla kuyo kwaye ikwenza ukuba uphucule kwaye uhlakulele izakhono zakho zokurhweba.
Ukuba uvula iakhawunti ye-AvaTrade yobuchwephesha, uya kunikwa amandla ngaphezulu nangaphezulu kwemida ye-ESMA. Oku kunokuba naphi na ukuya kuthi ga kwi-1: 400 yeebini ze-FX, ukuya kuthi ga kwi-1: 25 kwii-cryptocurrensets ezithile.
Zintathu iindidi zeekhrayitheriya ezifunekayo ukuze kuvulwe iakhawunti ye-'Ava yobungcali'- kwaye kuya kufuneka udibane ubuncinci kuzo zombini. Oku kubandakanya:
Kuya kufuneka ube ngaphezulu kwe- $ 500,000 kwiiphothifoliyo yakho yezemali: zombini imali okanye izixhobo zemali.
Ubuncinci ubuncinci iitransekshini ezinkulu ezili-10 kwikota nganye, kwikota ezine.
Ubuncinci bamava onyaka kwindawo yeenkonzo zezemali.
Umphathi wee-Akhawunti ezininzi-MAM
Okulandelayo, sineAvaTrade's 'MAM account' (Umphathi weAkhawunti ezininzi). Oku kunika amandla abathengisi bokulawula iiakhawunti ezahlukeneyo zabathengi kubandakanya:
Ukufikelela kwii-odolo ze-MT4 njengemida, ukuvala kunye nokuma njl.
Iyahambelana nee-EA's (abaCebisi ngeeNgcali)
Ulwabiwo lwabathengi ukusuka kwi-0.01 amaqashiso
Ukubekwa kwe-akhawunti yabathengi okungenamkhawulo
Ii-odolo zebhloko zeakhawunti
Amandla okwenza amaqela amashishini amancinci ahlukeneyo izicwangciso zorhwebo
Kunye neeakhawunti ezisemgangathweni esele sizikhankanyile, i-AvaTrade ikwabonelela ngeeakhawunti 'ezingatshintshi' -enye ebizwa ngokuba ziiakhawunti zamaSilamsi.
Ezi ngxelo zenzelwe ukulungiselela abalandeli benkolo yamaSilamsi kwaye zihambelana ngokupheleleyo nemigaqo yezemali yamaSilamsi. Kuba akukho mrhumo wenzala uya kuhlawuliswa okanye ufake ikhredithi, ezi akhawunti ziyaqwalaselwa halal kwaye uhlonipha umthetho weSharia.
Iingxelo zamaSilamsi azihambelani Ukurhweba nge-cryptocurrency, ke yithathele ingqalelo le nto. Kukwafanelekile ukuba uqaphele ukuba ukusasazeka kwezibini zangaphambili kuyonyuswa kwiiakhawunti ezingatshintshi. Ngaphandle koko, i-AvaTrade ayinakwenza mali.
Ukuqengqeleka kweCFD kwiAvaTrade
Ukuqengqeleka kweCFD kukuvumela ukuba urhwebe iiCFD ngaphandle kokuphazamiseka. Ngaphambi kokuba ikhontrakthi yakho iphele, i-AvaTrade izakutshintsha amaxabiso amadala esivumelwano kunye nentsha.
Ukuze ukwazi ukwenza oku, umrhwebi wakho kuya kufuneka alungelelanise iindleko phakathi kwezivumelwano zakho ezisisiseko. Ukuba ujonga icandelo le-CFD rollover kwiphepha lewebhu le-AvaTrade, uya kuba nakho ukujonga ikamva le-CFD 'lesitokhwe, ii-indices, iibhondi kunye nezinto zorhwebo.
Xa ukwiphepha lokudlulisa leCFD, uya kubona ulwazi olunje:
ikhontrakthi ekhoyo ngoku
ikhontrakthi yokuthengisa ezayo ngokulandelayo.
Sukuba nexhala lokuba awunamdla wokudluliselwa kweCFD. Qiniseka nje ukuba ngaphambi kokuba umhla wokudlula ufike uvale indawo yakho. Ukuba awuyenzi loo nto, uya kuhlawula imali yokuhlawula imali ubusuku bonke.
I-AvaTrade ikwenza ukuba ukhethe phakathi kweentlobo zeodolo ezaziwayo phaya ngaphandle ukuze zikunike amava okuthengisa aphezulu. Kuyatshiwo ukuba i-MT4 ibonelela ngalo lonke olona rhwebo ludumileyo kwizandla zakho. Ngale nto ithethwayo, iqonga eliphambili elisekwe kwiwebhu elinikezelwa yiAvaTrade nalo libanzi.
Ngokubalulekileyo -ss nje ukuba ixabiso lokungena kwi-odolo lifikelelwe, emva koko unokukhupha umda okanye umise i-odolo apho kuvulwe khona isikhundla. Okanye, unokukhetha ukuthengisa kwangoko okanye ukuthenga kwixabiso langoku lokuthengisa ngokubeka i-odolo yentengiso.
Emva koko une-'odolo yokungena ', eya kuthi ixhase isikhundla sakho ngexabiso elichaziweyo elizayo. Isikhundla siya kuhamba kuphela xa ixabiso lifunyenwe. Kuyenzeka ukuba usebenzise iodolo ecima ngokuzenzekelayo xa kusenziwa enye iodolo.
Abacebisi ngeengcali (EAs) babhekisa kwinkqubo ekuvumela ukuba uthengise ngaphandle kwezandla. Oku kubandakanya uphawu lokuthengisa oluzenzekelayo lweMT4. Unokuthenga okanye uphuhlise ezi nkqubo ngokwakho.
Izixhobo zoRhwebo eziFumanekayo
Kukho izixhobo ezininzi zokurhweba ezikhoyo kwicandelo 'lolwazi lokurhweba' kwiwebhusayithi. Abaxhasi beAvaTrade bafumana ukufikelela kwezi zixhobo ziluncedo kakhulu. Isixhobo esidumileyo yiChartChartist. Oku kusebenzisa i-MT4 kwaye kuya kuhlala kuskena iimarike zangaphakathi ukuze kusekwe amathuba orhwebo.
I-AutoChartist isebenzisa iinjini zayo zokuqonda ukujonga ezona zinto zikhuthazayo zokurhweba. Uya kuba nakho ukuqikelela ukuba ixabiso lezixhobo zezezimali liya kuhamba njani. Esi sixhobo sikwabonelela nge:
Uhlalutyo lwenqanaba eliphambili
Isalathi somgangatho womzekelo
Ukwamkelwa komzekelo weFibonacci
Uya kufumanisa ukuba i-AvaTrade ibonelela ngesixhobo sokubala esisebenza ngokufanelekileyo. Oku kuhle kuvavanyo lweendleko ezinokubakho, ilahleko kunye neenzuzo ngaphambi kokuba uqale urhwebe.
Konke okufuneka ukwenze kukufaka olu lwazi lulandelayo kwisikali sokubala:
Isixhobo onomdla kurhwebo
Imali ekwiakhawunti yakho ekuyo (okt i-USD)
Thenga okanye uthengise (lo ngumyalelo wakho)
Iqonga lokukhetha (umzekelo MT4)
I-AvaTrade ikwavumela ukuba ubone iimeko zokurhweba kudidi ngalunye lweeasethi, ezinje ngeemali zokukhuphela, izinto onokukhetha kuzo, iFX, izitokhwe, ii-indices, izinto zorhwebo, ii-ETF, kunye neebond.
Impahla nganye iya kuza nedatha efana nale:
Ilizwe kunye nemali
Ubuncinci besayizi yorhwebo kunye nobuncinci besayizi yokurhweba ngegama
Inzala yobusuku (yonke imihla) thengisa kwaye uthenge
Ngokufana noninzi lwabarhwebi, i-AvaTrade inekhalenda enkulu yezoqoqosho. Oku kuya kukwazisa igama, umhla kunye nexesha lomsitho obalulekileyo kunye nesiphumo esiqikelelweyo.
Ngokunxulumene nekhalenda yezoqoqosho, i-AvaTrade 'ikhuphe umvuzo'. Oku kukuxelela xa iinkampani ezinkulu zinokubhengeza umvuzo wazo. Ewe kunjalo, oku kuya kubaluleka njengoko kuhlala kuchaphazela amaxabiso esitokhwe.
Ukuba ujonga izibonelelo ezahlukeneyo zemfundo ukuze ukwazi ukufunda izakhono ezitsha, okanye ukongeza nje kwizakhono osele unazo, i-AvaTrade ayizukuphoxeka.
I-Avatrade ibonelela abathengi uluhlu olubanzi lwamacandelo emfundo kwizifundo zorhwebo, iincwadi ze-forex, ukuwohloka kwezalathi zoqoqosho kunye nezifundo ezahlukeneyo zevidiyo kwezorhwebo.
Xa usaphula icandelo ngalinye, kukho inani lezixhobo ezahlukeneyo onokuzisebenzisa.
Ngaphantsi kwecandelo 'lokurhweba kwabasaqalayo' kuphela uza kubona:
Thelekisa amaqonga orhwebo
Isicwangciso sokuhamba esiphakathi
Ukurhweba kwi-Intanethi bengqondo
Ukufunda iitshathi zokurhweba
Zininzi kweli candelo, kwaye uninzi ngakumbi phantsi kwamacandelo alandelayo ukukunceda ukuba ungene kwizakhono zakho.
Ngaphakathi kwicandelo lezemfundo 'ulwazi lokurhweba', uya kubona icandelo elinobunzulu kuhlalutyo. Le yindlela elungileyo yokufunda malunga nohlalutyo lobuchwephesha kunye nohlalutyo olusisiseko- yeyiphi eyona nto yinxalenye enkulu yokuba ngumrhwebi ophumeleleyo.
I-AvaTrade icacisa uhlalutyo ngalunye ngokweenkcukacha, ngaphambi kokuthelekisa kunye nokwazisa ukuba loluphi uhlobo lohlalutyo ekufuneka ulusebenzisile. Ukuba awazi ukuba uqale ngaphi, i-AvaTrade iya kukunika inyathelo ngenyathelo malunga nendlela yokwenza oko.
Icandelo lohlalutyo lobuchwephesha lineenkcazo zohlobo ngalunye lwendlela ekufanele ukuba ujonge kuyo kunye nenkcazo epheleleyo nganye.
Kwi-AvaTrade, e-UK nakubarhwebi baseYurophu abathengisa ngemida yokulinganisa ebekwe yi-ESMA
Iibini eziphambili zemali: Ukuphakamisa cap 30: 1
Igolide, izibini zemali ezingabalulekanga kunye nezalathiso eziphambili: Ukuphakamisa cap 20: 1
Izinto ezingezizo zegolide kunye nee-indices zokungalingani ezinkulu: Ukuphakamisa cap 10: 1
Amanye amaxabiso esalathiso kunye namashishini: Ukuphakamisa cap 5: 1
Iimali zemali zedijithali: Ukuphakamisa cap 2: 1
Njengoko kuphawuliwe ngaphambili, abathengisi abaqeqeshiweyo nabangengabo base-UK / EU banokuthi bafumane imida ephezulu kakhulu. Oku kunokuba phezulu njenge-1: 400 kwi-AvaTrade, enkulu kakhulu.
Sebenzisa ubungakanani kurhwebo lweCFD alukhuthazwa ukuba ungumtsha kwindawo yokuthengisa. Ke ngoko, ukuqonda kakuhle indlela ezisebenza ngayo iimarike kunye nokwenza umsebenzi wesikolo ngaphambi kokuba uqale kubaluleke kakhulu kwimpumelelo yakho eAvaTrade.
Ukusasazeka koKhuphiswano eAvaTrade
Kwimeko ezininzi, i-AvaTrade ayikuhlawulisi naziphi na iikhomishini. Endaweni yoko, kufuneka benze inzuzo ngokusasazeka. Ukusasazeka kwe-AvaTrade kucingelwa ukuba kufanelekile njengokuba kunjalo, kodwa bazama ngokuqhubekayo ukunciphisa oku nangakumbi.
Umzekelo, i-AvaTrade kutshanje ibhengeze ukuba ukusasazeka kwezorhwebo nge-crypto kuncitshisiwe yi-50%. Ekugqibeleni, xa abathengisi abanjengo-AvaTrade beqinisekiswa ngakumbi kwimarike yentengiso, banako ukuba nesisa ngakumbi ekusasazeni abathengi babo.
Imirhumo ye-AvaTrade iyasebenza
I-Avatrade ibonelela ngokusasazeka kakhulu kukhuphiswano, ngokuyinxenye enkosi kuyo ngokuba ngumrhwebi wentengiso. Ukuthetha ngokubanzi, akukho zintlawulo zekhomishini zorhwebo. Njengoko besesitshilo ngaphambili, iarhente yabarhwebi endaweni yoko yenza inzuzo ngokusasazeka.
Ukungasebenzi kwemali yenye into ekufuneka uyiqwalasele. Ukuba ucwangcisa ukuthengisa kube kanye kwinyanga eluhlaza okwesibhakabhaka, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba ukuba awusebenzisi iakhawunti yakho iinyanga ezi-3 ezigcweleyo i-AvaTrade izokubiza 'umrhumo wokungasebenzi'. Oku kufikelela kwiiyunithi ezingama-50.
Oku kuyakuhlawuliswa ngexesha ngalinye lokungasebenzi kwaye iya kuhlala ihlawuliswa ngayo nayiphi na imali ekwiakhawunti (GBP, EUR okanye USD).
Kwabo bacwangcisa ukuthengisa izixa ezikhulu, i-AvaTrade ibonelela ngezibonelelo ezininzi. Umzekelo, i-AvaSelect yinkqubo yomvuzo Abarhwebi be-VIP. Ukuba uyinxalenye yale nkqubo emva koko uya kuba nakho ukufikelela kumagama angcono okurhweba. I-AvaSelect ichaza iidiphozithi ezingaphezu kwe-100,000 iiyunithi (i-GBP, i-EUR okanye i-AUD) okanye urhwebo olubalelwa kwizigidi ezili-100 zeeyunithi ngevolumu.
Ukuvula iAkhawunti kwiAvaTrade
Ukuvula iakhawunti kwi-AvaTrade kulula kakhulu. Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuya kwiwebhusayithi yomthengisi kwaye ugcwalise ifom yesicelo. Oku kuyakufuna igama lakho elipheleleyo nedilesi, iinkcukacha zonxibelelwano, umhla wokuzalwa, kunye nenombolo yerhafu yelizwe.
Uya kuthi emva koko uqinisekise ubungqina bakho. Oku kwenziwa ngokuthumela ikopi yepasipoti yakho okanye iphepha-mvume lokuqhuba. Emva koko kuyakufuneka ungenise ubungqina bakho bedilesi, edla ngokuba yibhili yokunceda okanye nayiphi na ileta esemthethweni enegama lakho nedilesi (kwiinyanga ezi-6 ezidlulileyo).
Emva koko, uya kufumana isiqinisekiso kwaye unokufaka imali kwiakhawunti yakho kwaye uqalise ukurhweba.
Izinto ezimbalwa ekufuneka uziqaphele zezi:
Nje ukuba ukhethe isiseko semali yeakhawunti yakho awungekhe uyitshintshe kamva.
Ukuba ujonga ukuvula iakhawunti yequmrhu, qaphela nje ukuba kuya kufuneka ubonelele ngezinto ezinje; irejista yabanini zabelo, isatifikethi sokufakwa kunye nememorandam.
Njengoko besichukumisile ngaphambili, i-AvaTrade ayizukubamkela abathengi abavela e-United States. Isizathu sokuba, abalawulwa kwelo lizwe abanakho ukubonelela ngenkonzo.
Kwi-AvaTrade kukho ukhetho olulungileyo lweendlela onokukhetha kuzo.
Amakhadi etyala anjengeMastercard kunye neVisa
Ukhetho lwee-wallet ezifana neNeteller, iWebMoney, iSkrill kunye nePaypal
Qaphela, ukuba kunokwenzeka ukuba ukwi-EU okanye e-Australia, awuyi kuvunyelwa ukuba uhlawule ngokusebenzisa i-e-wallet. Ukuba useCanada, awunakho ukwenza idipozithi yakho ngekhadi letyala.
Uya kucelwa ukuba wenze ikopi yombala wekhadi lakho ukuba ukhetha idebhithi / ikhadi lekhredithi. Qiniseka ukuba igama lakho, umhla wokuphelelwa, kunye neenombolo ezine zokuqala nezokugqibela zekhadi zicacile ukuba zifundwe. Kuya kufuneka ubandakanye ngaphambili nangasemva kwekhadi lakho, kodwa kuya kufuneka ukhusele ikhowudi yokhuseleko enamanani ama-3 (i-CVV) ngaphambi kokuba uyithumele.
Xa kuziwa ekubeni idipozithi yakho izakuthatha ixesha elingakanani, ixhomekeka ikakhulu kwindlela oyisebenzisayo yokuhlawula. Amakhadi okutsala / amakhadi etyala, umzekelo, akhawuleza. Ngale nto ithethwayo, ukuba le yidiphozithi yakho yokuqala unokuyifumana ithatha iiyure ezingama-24, ikakhulu ngenxa yokuba kufuneka uqinisekise isazisi sakho.
Kwelinye icala, ukudluliselwa kwebhanki (ukuhanjiswa ngocingo) kuye kwaziwa ukuba kuya kuthabatha naphi na ukuya kwiintsuku ezisi-7. Ukuba le yindlela yakho yokuhlawula oyikhethileyo, sicebisa ukulandelela udluliselo lwakho. Unokwenza oku ngokunika ngokulula i-AvaTrade ikhowudi yakho ekhawulezayo okanye irisithi.
Idipozithi encinci yokuvula iakhawunti yeAvaTrade yi- $ 100. Xa sele uthethile, i-AvaTrade icebisa ukuqala ubuncinci nge-1,000-2,000 yayo nayiphi na imali esisiseko sakho.
Konke okufuneka ukwenze ukuze wenze idiphozithi kwi-AvaTrade kukungena ngemvume, yiya kwicandelo 'lediphozithi' kwaye ukhethe indlela oyikhethayo yokuhlawula.
Xa kuziwa ekurhoxisweni kwi-AvaTrade, ewe, kuya kufuneka uqale uqinisekise iakhawunti yakho. Emva kokuqinisekiswa kweakhawunti unokufumana iphepha lokurhoxa kwiqonga le-AvaTrade kwaye ugcwalise le fomu. Ungalindela ukuba isicelo sakho sokurhoxa siqhubekeke ngaphakathi kweeyure ezingama-24.
Njengokuba kunjalo kubo bonke abathengisi abasemthethweni, i-AvaTrade ilandela imigaqo engqongqo yokulwa imali ngokungekho semthethweni. Oku kuthetha ukuba uyakufuneka urhoxise iimali zakho usebenzisa indlela efanayo yokuhlawula oyisebenzisileyo ukufaka iakhawunti yakho.
Umzekelo, ukuba uqala ukufaka iakhawunti yakho usebenzisa ikhadi lakho ledebhithi, kuya kufuneka usebenzise ikhadi elifanayo lokutsala ukuze ukhuphe. Ngokubhekisele kwi-debit kunye namakhadi etyala, ngaphambi kokuba ukwazi ukukhetha indlela eyahlukileyo yokuhlawula ukukhupha imali kuyo, kuya kufuneka ukhuphe ukuya kuthi ga kwi-200% yedipozithi yakho kwikhadi lakho lokuqala olikhethileyo.
Ngokwesiqhelo uya kufumanisa ukuba imali yakho iza kuqwalaselwa kwaye ithunyelwe kuwe kusuku olunye lokusebenza xa usebenzisa i-e-wallets. Kwimeko yetyala kunye namakhadi etyala, ukurhoxa kwakho kungathatha ukuya kwiintsuku ezintlanu zokusebenza.
Kuxhomekeka ekubeni usebenzisa yiphi na ibhanki, kwaye uhlala kweliphi ilizwe; Ukudluliselwa kwemali ebhankini kungathatha naphi na ukuya kwiintsuku zokusebenza ezili-10 ukufika.
Ngale nto ithethwayo, ukusebenzisa i-Ava debit MasterCard ithathwa njengeyona ndlela ikhawulezayo yokufumana imali yakho. Ungasoloko usifaka isicelo sokwenza enye yezi emva kokuba ubhalisile.
Inkxaso yoMthengi kwiAvaTrade
Ukuba ufuna naluphi na uncedo kwi-AvaTrade, kukho iqhosha 'lokuncokola bukhoma' kwicala lasekunene lewebhusayithi. Kancinci ngasekunene koku kuyakubakho inombolo yefowuni ehambelana nendawo okuyo.
Ukuba kunokwenzeka ukuba ukwelinye ilizwe ngexesha lakho lokudinga, ungasoloko ukhetha ngesandla ilizwe elahlukileyo ukufumana inombolo yefowuni ehambelana nayo.
Iphepha leziko loncedo kwi-AvaTrade linobunzulu obulungeleleneyo, kunye nee-FAQs ezahlulwe ziipokotho. Nangona abanye abathengisi bexela ubunzima ekufumaneni ikhonkco kwiphepha le-FAQ kwiwebhusayithi.
Ngaba iZibonelelo zeAvaTrade ziya kwamkelwa?
I-Avatrade ibonelela ngamabhonasi okwamkela amaxesha ngamaxesha. Ukuba usandula ukujoyina kwaye awukayifumani, kuyacetyiswa ukuba uthethe nomphathi weakhawunti yakho ukuze ubone ukuba uyafaneleka na.
Kuhlala kuchazwa ukuba kuya kufuneka ubambe ithagethi ethile yorhwebo kwiinyanga ezi-6 zokuqala (okoko ufake imali), ngaphambi kokuba ube nokufumana izandla zakho ibhonasi.
Iinkonzo kunye neengozi zeAvaTrade
Iintlobo ngeentlobo zeeasethi ezikhoyo
Ukusasaza ukubheja kuyafumaneka kubathengi base-UK
Iinketho zeelwimi ezininzi
Iiakhawunti zedemo zeAvaTrade
Umrhwebi olawulwa ngokupheleleyo
Amaxesha okurhoxa okucothayo ukuya kwiintsuku zokusebenza ezi-5 ngamanye amaxesha
Abathengi baseMelika abavunyelwe.
I-AvaTrade inoluhlu olukhulu lwezixhobo zabatyali mali abanokukhetha kuzo kunye namaqonga ahlukeneyo. Oku kukuvumela ukuba ukhethe eyona ilungele iimfuno zakho zokurhweba.
Abakho baninzi abathengisi abakwi-Intanethi abasasazeka ngokuqinileyo kwimpahla ye-crypto, ngenxa yoko oku kuyasebenza ngokuthandwa yiAvaTrade. Isixa sommiselo we-AvaTrace sigutyungelwe kwihlabathi liphela asinakuba yinto embi, nokuba yeyiphi.
Njengesiqhelo, ukuba awungomrhwebi onamava kodwa ufuna ngenene ukunika i-AvaTrade indawo - thatha ithuba elipheleleyo ngeakhawunti yedemo ngaphambi kokuntywila kanye ngemali yokwenyani.
Ekugqibeleni, i-AvaTrade ithandwa ngenxa yezizathu ezininzi. Kodwa, enye yeempawu zokuma komthengisi lelona gama libalaseleyo lokuthobela. Kananjalo, unokuqiniseka ukuba uyathengisa kwindawo ekhuselekileyo nekhuselekileyo ye-Intanethi.